Faka imibala ebonakalayo kwimifanekiso-iGeofumadas
Ikhaya/GvSIG/Faka imibala ebonakalayo kwimifanekiso
Imifanekiso emininzi baye banqunyulwa ukusuka kwiipoligoni, kodwa ukwenza njalo akuzange kusete umbala ongasemva obonakalayo kwaye kubonakala kumnyama okukruqulayo. Okanye kwezinye iimeko, sifuna ukuba uluhlu lwemibala lungabonakali; Masibone ukuba ungayenza njani:
Ndiyisebenzisa ingqungquthela ye1.9, Ekugqibeleni ubudenge bokukhuphela buphelile, kwaye kwimizuzu engaphantsi kwamashumi amabini iyehla. Ngendlela, jonga indawo ekuyo kwipaneli yasekhohlo, kwisitayile se qgis.
Ukongeza ukonakala komfanekiso, oku kulandelayo kwenziwa:
Inkinobho yokunqanda kwinqanaba, kwicala lohlangothi, esikhethayo iipropati ze-raster.
Emva koko kwipaneli eyandisiweyo, sikhetha ithebhu ngokungafihli, kwaye usebenze ibhokisi yokukhangela
Kuyimfuneko ukwazi ukudityaniswa kombala we-rgb, kule meko ndifuna ukususa abamnyama, indibaniselwano ilula: 0,0,0. Ke siyayongeza, ngalo mzuzu umnyama ubonakala ekuhleni.
Ukuba awukwazi ikhowudi ye-rgb, ungayikhetha kwiskrini kunye nezinye iinkqubo zamahhala ezihamba ngeenxa zonke, njenge-Picual Color Picker, ukunika umzekelo.
Ukugcina iinguqulelo esicinezelayo kwamkela
Imibala emininzi ingeniswa, nangona ayiyi kubuhlungu ukuba iinguqulelo zegvSIG ziza kudibanisa umkhethi wemibala ezithatha ngokuchofoza kwisikrini.
Nge Microstation V8
Kulo umphathi we-raster, sikhetha umfanekiso kunye neqhosha lasekunene, kwaye ke izicwangciso zesinamathiselo.
Sitshekisha ibhokisi lokukhangela esitransparenti
Emva koko sikhetha umbala olindelwe obala.
Emva koko sicinezela iqhosha Faka
Ups! unokukhetha kuphela imeko eyodwa kunye neyodwa ekukhanyeni kwabo bonke abanye.